Dabkii Xooganaa ee Saakay ka Kacay Suuqa Bakaaraha oo Lagu Guulaystay in La Damiyo (SAWIRRO)
February 27, 2017 – Dabkii xooganaa e saakay aroortii ka kacay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa goor dhaw lagu guuleystay in la damiyo,iyadoo dab kani uu gaystay qasaaro naf iyo maalba leh.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir iyo mas’uuliyiin kale ayaa gaaray goobta dabka uu ka kacay, halkaasi oo ay indhahooda ku soo arkeen sida xaalada ay tahay.
Sidoo kale waxaa isagana Suuqa Bakaaraha soo gaaray, Taliyaha ciidanka Nabad Suggida iyo Taliyaha Booliska, waxayna Saxaafadda u sheegeen in Madaxweynaha uu soo amray inay halkaasi tagaan shacabkana ay la qaybsadaan dhibaatada.
Waxaa la xaqiijiyay in labo ruux oo shacab ah ay dabkaasi ku dhinteen, kuwaasi oo ganacsato ahaa iskuna dayaayay inay goobahooda ganacsiga ay badbaadsadaan.
Dabka ayaa la xaqiijiyay inuu baabi’yay hanti badan oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed, kuwaasi oo iminka ku hanti beelay dabka Suuqa Bakaaraha qaybo ka mid ah baabi’iyay.
Ciidamada dowladda ayaa la geeyay goobta dabka uu ka kacay, waxaana dabka meelaha uu saameeyay ka mid ahaa Suuqa Khaliifa, Qaybta dahabka Bakaaraha, qaybta Maacuunta lagu iibiyo iyo qaybaha kale carwooyinka u dhaw goobtaasi.
February 27, 2017 Geesey